Iimveliso zeMali | Ezezimali (Ekhasi 3)
Ngaphakathi kwintengiso yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba inento enye eqinisekileyo kwaye oko kukuthi ukusukela ngoku ukuqesha imali mboleko kuya kubiza kakhulu ebantwini kunakwimakethi yearhente yokuthengiswa kwezindlu kunento enye eqinisekileyo kwaye oko kukuthi ukusukela ngoku ukuqesha ubambiso zibize kakhulu kubantu abafuna ukuthenga indawo yokuhlala kwaye ngenxa yesi sizathu kufuneka baqwalasele izitshixo ezithile
Kukho inkolelo kwinxalenye elungileyo yabasindisi ukuba iimveliso zotyalo-mali kunye nokonga zinokufunyanwa kuphela kwenye yezinto ezinqabileyo iinkampani zeinshurensi ezikhoyo kukuthengisa i-inshurensi yokonga abantwana
Ukujongana nokwehla okubonakalayo kwimarike zamashishini zamashishini ezingenanzala emisiweyo, enye yeendlela zokulawula ukonga ikwiidipozithi zebhanki.Kwisiqingatha sesibini sonyaka, isenokuba lixesha lesivumelwano semali ebhankini yexesha elizinzileyo kuba ngaphandle kwenqanaba lentengo ephantsi kukho Izicwangciso ezahlukeneyo esinokuthi sandise ukusebenza kwakho
Ukuze ungabinangxaki kulawulo lwakho lwengxowa-mali elandelayo, siza kukucebisa ukuba wenze iphothifoliyo esisiseko.
Elinye lamaqhinga okufezekisa injongo yakho kutyalo-mali kwiimarike zengeniso ngokungathandabuzekiyo kukujonga inkxaso abanayo kwiLinye lamaqhinga okufezekisa injongo yakho kutyalo-mali kwiimarike zengeniso akukho mathandabuzo oko kukubeka esweni inkxaso abanayo kuhlalutyo lwabo lobugcisa
Amanyathelo okuthenga indlu
Ukufunyanwa kwendlu ngumsebenzi obaluleke kangangokuba awuyi kuba nakho ukushiya nasiphi na isithuba ezandleni zokuphuculwa. Ukuthenga indlu yinto ebaluleke kakhulu kangangokuba awuyi kukwazi ukushiya nasiphi na isithuba sokuhlaziya. Ukuba akunjalo, iya kuba yinkqubo efuna ukucwangciswa okuninzi kunye nenqanaba elithile lokuzinikezela.
Iimali zotyalo-mali yenye yeemveliso abatyali mali abancinci nabaphakathi abakhethwayo ikakhulu njengesixhobo semali yotyalo-mali yenye yeemveliso abatyali-mali abancinci nabaphakathi abakhethwayo ikakhulu njengesixhobo sokwenza inzuzo yabo ingeniso.
Iimali zotyalo-mali ezihlanganisiweyo kwii-equity zibonelela uthotho lwezibonelelo ezinokuba nomdla ngakumbi.
Inani lobambiso kumakhaya abhaliswe kwiirejista zepropathi ngama-31.018, i-9,2% ngaphezulu kwinqanaba lonyaka. Le yeyona datha ifanelekileyo. Umyinge we-123.911 ye-euro, ngokunyuka kwe-2,9%, ngelixa isixa semali-mboleko ebhaliswe kwiirejista zepropathi ngoFebruwari (kwizenzo zikarhulumente ezenziwa ngaphambili) zi-163.487 euro
Ngexesha leeholide zasehlotyeni kulo nyaka, ama-60% abantu baseSpain (Oko kukuthi, inani elipheleleyo labemi abangama-28,04 ezigidi) baya kuya eholideyini kwaye Ngexesha leeholide zasehlotyeni kulo nyaka, ama-60% abantu baseSpain (Oko kukuthi, inani elipheleleyo labemi abazizigidi ezingama-28,04) yiya eholideyini.
Iinshurensi zigcina abathengi bazo i-47,90 kwi-euro nganye abayichitha ekuphandeni iimeko ezinokubakho zobuqhetseba. Esi sesinye sezigqibo zokuba i-inshurensi igcina abathengi bayo i-euro ezingama-47,90 njengemali abayabayo ukuphanda amatyala obuqhetseba.
Enye yeemeko apho impikiswano inkulu khona kukwahlula eyona nto iyidiphozithi kunye nesiqinisekiso.
Okulindelwe yi-ENCE kwiimarike ze-equity ngoku kuxhomekeke kwisigqibo esinokubakho sokuvala indawo yokugaya iPontevedra. Okulindelwe yi-ENCE kwiimarike ze-equity ngoku kuxhomekeke kwisigqibo esinokubakho sokuvala indawo yokugaya iPontevedra
Kwintsalela yonyaka, i-Ibex 35, xa iyonke, inokuphinda ibe nokuhlaziywa kumaxabiso ayo phantse ama-16%.
Ukuba kukho ukhuseleko olubonisa imeko engenakoyiswa, ayikho enye ngaphandle kwenkampani yokwakha ye-ACS. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba libonakalise umba wobuchwephesha Ukuba kukho ukhuseleko olubonisa imeko engenasiphene ephezulu, ayisiyonto eyenye ngaphandle kwenkampani yokwakha i-ACS, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ibonisa imeko yezobuchwephesha engenakulunga
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeasethi yezemali esebenze ngokugqwesileyo kulo nyaka yigolide. Ixabise ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60, enye yezona mpahla zezezimali zisebenza kakuhle kulo nyaka igolide kwaye i-h% iye yaxabisa ukuya kuthi ga kuma-60%, yenye yezona ziphezulu kuzo zonke iimarike zezemali.
Silondoloza phi imali esiyigcinileyo? Lo ngumbuzo obalulekileyo ukucacisa ukuba yeyiphi imephu yotyalo-mali kwilizwe lethu. Inqaku elothusayo ngakumbi kolu hlalutyo kukuba ezi mveliso zimbini zemali zinokuzikhethela okukhulu phakathi kwabasindisi akubandakanyi ukuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo.
I-Enagás ifumene kwi-2018 inzuzo emva kwerhafu (BDI) ye-442,6 yezigidi ze-euro, emele ukukhula kwe-1% ngokwe-Enagás ifumene ngo-2018 inzuzo emva kwerhafu (BDI) ye-442,6 yezigidi ze-euro, emele ukukhula kwe-1% ngokwemigaqo efanayo
Kubonakala ngathi buxoki ngeli xesha lonyaka, kodwa enye yezona ndawo zibonakala zimbi okwangoku yinkampani yegesi yesizwe i-Enagás. Kude kube ngoku kubonakala kungakholeki ngeli xesha lonyaka, kodwa enye yezona ndawo zikhangeleka zibi okwangoku yinkampani yegesi yesizwe i-Enagás
Kufuneka kusoloko kukhunjulwa ukuba xa ilahleko yemali isenzeka kwiimarike zezabelo, kukusilela kwesicwangciso-mali sabatyali mali. Kuzo zonke izinto ongenakulibala ukuba ukuthengiswa kwezahlulo kungabangelwa kukusilela kolwazi kwiimarike zezabelo
Ngaba i-Iberdrola inokuya phezulu kwimarike yemasheya?
Akukho nanye kwezona zibambiso zininzi zotyalo-mali kwiimarike eziguquguqukayo zenkampani ngumbane wombane we-Iberdrola. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba Akukho nanye kwezona ndawo zikhuselekileyo zotshintshiselwano ngeentengiso kwimarike yengeniso eguquguqukayo yinkampani yombane i-Iberdrola kwaye kwinqanaba lokuba kwiinyanga ezimbalwa iphakame kwizikhundla zayo ukuya kwi-euro ezingama-9 ngesabelo ngasinye.
Xa siphakathi embindini wexesha likamongameli waseMelika, uDonald Trump, inye into eqinisekileyo esinokuyithetha. Indaleko xa siphantse ukuba phakathi kwesiqingatha sexesha likaMongameli wase-United States, uDonald Trump, inye into esinokuyithetha ngokuqinisekileyo kwaye kukuba ukuvela kweemarike zezabelo kuye kwaba kuhle kwaye kuthandwa umdla. yabatyali mali abancinci nabaphakathi
Ngaphakathi kwicandelo lotyalo-mali, uthotho lwamaqonga orhwebo lwedijithali sele enziwe anikezela ukhetho lokutyala imali kwizitokhwe kwaye eyona ngxaki inkulu kula maqonga okutyala imali kwi-cryptocurrensets kukuba babonelela ngokhuseleko olukhulu kwinkxaso yabo yetekhnoloji
Ewe bukhona ubomi ngaphaya kwemarike yemasheya kwaye phakathi kwabo kuvela uthotho lweemveliso ezingaziwa ngakumbi ngabatyali zimali ezibandakanya okungakumbi Kakade kukho ubomi ngaphaya kwemarike yemasheya kwaye phakathi kwabo kuthotho lweemveliso ezingaziwayo ezimeleyo. umngcipheko omkhulu kwimisebenzi yabo
Iziphumo zonyulo kwiPalamente yaseYurophu ebibanjwe nge-26 kaMeyi zingakhokelela kwimpikiswano entsha phakathi kwe-Itali neBrussels ezinokuba neziphumo zonyulo kwiPalamente yaseYurophu eyayibanjwe nge-26 kaMeyi kungakhokelela kwimpikiswano entsha phakathi kwe-Itali neBrussels. inokuba nefuthe elithile kwiimarike zokulingana zelizwekazi elidala
Olunye umahluko oluhlala lusetyenziselwa ukuthengisa iimarike zokulingana kukurhweba kukhuseleko lokuthengisa esidlangalaleni. Umahluko osoloko usetyenziselwa ukusebenza kwiimarike zezabelo kukurhweba ngokhuseleko lwezokhuseleko olurhwetyelwe esidlangalaleni.
Enye yeenjongo eziphambili zabo nabaphi na abatyali mali abancinci nabaphakathi kukuthintela ilahleko ekubeni ifakwe kwipotfoliyo yotyalo mali. Okanye yeyiphi enye yeenjongo eziphambili zomtyali-mali omncinci nophakathi kukuthintela ilahleko ekufakweni kwipotifoliyo yotyalo-mali
Imarike yemali yangoku ivumela utyalo-mali kwisilivere kwiindlela ezahlukeneyo zotyalo-mali. Ukusuka kolona hlobo lutofotofo nolwemveli ngohlobo lwemali Abatyali mali okwangoku banokuzifumana benoluhlu olulinganiselweyo lweemarike kunye neemveliso ezichazwe kwisilivere, ezivela kwiinkampani zemigodi ezithengiswa esidlangalaleni.
Intlanganiso yenyanga yoKwindla yi-European Central Bank (i-ECB) ityhile oko bekuqwalaselwa ngabahlalutyi bezemali. Ngamanye amagama, amaqondo enzala kwindawo ye-euro aya kuqhubeka njengoko bekunjalo ngaphambili kwaye awuzukunyuka kwangoko ekupheleni kwalo nyaka, kwimeko ekohlwaya isenzo sabasindisi
I-Bankinter ivale ngempumelelo kwaye kwiiyure nje ezintathu ukubekwa kwintengiso yemicimbi yamatyala aphezulu kwicandelo elikhethiweyo kwisixa seBankinter ivale ngempumelelo kwaye kwiiyure nje ezintathu ukubekwa kwintengiso yetyala elikhulu kwicandelo elikhethiweyo. ngesixa-mali se-500 yezigidi ze-euro, ngaphezulu kweminyaka emihlanu, kumda we-75 yamanqaku esiseko ngaphezulu kwe-midswap
Olunye ukhuseleko olunomthamo omkhulu weekhontrakthi kwisalathiso sikazwelonke esikhethiweyo, i-Ibex 35, yiTeleco Telefónica. Kodwa ikwayenye yezokhuseleko kunye nelona nani liphezulu lezivumelwano kwisalathiso sikazwelonke, i-Ibex 35, ngumnxeba weTelefonica, kodwa ikwayenye yezokhuseleko ezenza eyona nto idanisayo phakathi kwamancinci naphakathi abatyali mali
Elinye lamaxabiso esalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, esebenze ngokugqwesileyo kwezi nyanga zigqithileyo ibiyenye yeenqobo zesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, ethe yenza eyona kwiinyanga zamva nje, u-Acciona ubenjalo
Enye yeendlela ezizezinye zotyalo-mali zimelwe ziimarike zemali zemali. Le nkqubo yokutshintshiselana ngezezimali zamanye amazwe Ngaphakathi kwimeko yemali yamanye amazwe, akukho mathandabuzo ukuba icandelo lenzuzo lidlala indima ebaluleke kakhulu ukusukela ngoku.
La ngawona maxesha alungileyo eendaba ezimanyelwayo nezibhalwe kuLingano lweSpain. Babhaptizwa kwisitishi se-bearish Kwiiseshoni zorhwebo zamva nje, isitokhwe seMediaset España sihamba ngokugada okuqinileyo, phezulu nasezantsi.
Esinye sezona sitokhwe sitshisayo kwii-equity zaseSpain kwezi ntsuku ngokungathandabuzekiyo yi-Mediaset. Ukuza kuthi ga ngoku ukuba iKhomishini kaZwelonke yokuFuneka ikhumbule ukuba iMediaset Spain yenze imali eyi-2.263 yezigidi ze-euro kwi-Ibex 35, ke le ntshukumo iya kuba neendleko ezimalunga ne-1.200 yezigidi zeerandi.
I-Barcelona Stock Exchange, eyinxalenye yeqela leBolsas y Mercados Españoles (BME), iqhubekile nokuphonononga ukwenziwa kunye nobunzima beenkampani Mhlawumbi uninzi lwabatyali mali abakwaziyo ngeli xesha, kodwa ukhuseleko oluhambisa izabelo phakathi kwabo Izabelo zidityanisiwe kwizalathiso zeempawu ezahlukeneyo
Ipesenti yomndilili eSpain ikhule kumaxesha akutshanje malunga neepesenti ezi-6. Kude kube kufikelelwe kwisixa sama-euro angama-985,16 ngenyanga, ngokweedatha Umndilili wepenshoni eSpain ukhule kwindawo yokugqibela eyi-6%. Kude kube kufikelelwe kwinani lama-euro angama-985,16 ngenyanga, ngokweedatha ebonelelwe liSebe lezeMisebenzi
Enye yezona zinto zohlwaywa kakhulu kwiimarike zezabelo kukuba uqoqosho lunokuba kwimeko yokudodobala Enye yezona zinto zohlwaywa kakhulu kwiimarike zezabelo kukuba isenokuba kwimeko yokudodobala kuqoqosho lwamazwe aphesheya.
Njengoko kulindelwe, izinto azihambi kakuhle kwisalathiso esikhethiweyo sokulingana kweSpain, i-Ibex 35, kweli candelo lesibini lonyaka. Njengoko bekulindelwe, izinto azihambi kakuhle kwisalathiso esikhethiweyo sokulingana kweSpain, i-Ibex 35, kweli candelo lesibini lonyaka
I-European Central Bank (i-ECB) ithathe isigqibo ngalo Lwesine ukuba igcine inzala ingatshintshi kude kube sisiqingatha sokuqala se-2020. Oko kukuthi, ireyithi ye-European Central Bank (i-ECB) ithathe isigqibo ngalo Lwesine ukugcina inzala ingatshintshi kude kube sisiqingatha sokuqala 2020
Umda phakathi konikezelo kunye nemfuno uqinile kakhulu ukusukela ngo-1996. Nokuba ngo-1996, 1997, 2000 no-2001, ubonelelo belungonelanga kwaye bekukho.Nangayiphi na imeko, igolide yenye yeendlela ezizezinye zokufuna ikhusi kwiimeko zokungazinzi. kwiimarike zezabelo
Sikwiveki ephambili kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela, kodwa ngakumbi iSpanish, enokuthi ikhokelele kumgangatho ocacileyo wokuhla ukuya kuthi ga ubuncinci okoko i-Ibex 35 ingabuyiseli inqanaba lamanqaku ayi-9.500 olwahlulayo ngoku phakathi kokuphakama nokuya ezantsi.
INgxowa-mali yesizwe yoTyalo-mali ibhalise esona siqalo sigqwesileyo sonyaka kuthotho lwembali, kunye nenzuzo eqokelelweyo ye-3,3% kuzo zombini. Esinye sezitshixo zokukhusela ukonga kwethu kwimeko ezinokubakho kwiimarike zezemali kusekwe ekuhlukaniseni imixholo yazo.
Esinye sezigqibo ezifikelelwe yiParcoin Investment Barometer yokuqala kwingxelo yayo yamva nje kukuba isithandathu kwabalishumi abasindisi baseSpain Okokuqala kukhankanywa ukuba isiphumo sokuqala sokusetyenziswa kotyalo-mali lwedijithali okanye lwe-Intanethi kukuba ngokungathandabuzekiyo inceda ukunciphisa iindleko.
Ukutyala imali kwiibhondi eziluhlaza kunokuba yenye yeendlela ezinomdla kakhulu zotyalo-mali kwaye yenye yezona mveliso zithandwa kakhulu Utyalo-mali kwiibhondi eziluhlaza lunokuba yenye yeendlela ezinomdla kakhulu zotyalo-mali kwaye yenye yezona mveliso zibalulekileyo ezingaziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
I-Nokia Gamesa: iyingozi xa ujongene nemeko zentengiso yemasheya
Elinye lamaxabiso alandelwa kakhulu ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ngokungathandabuzekiyo yiNokia Gamesa. Ikhethekile, kuba yile nto bayiyo Enye yexabiso elilandelwa kakhulu ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ngokungathandabuzekiyo yiMidlalo yeMidlalo yeNokia kwaye ikhethekile, ngenxa yabo bayathanda ukwenza imisebenzi yokuqikelela ngakumbi.
Iinkampani zemithombo yeendaba zosasazo zonxibelelwano kuzwelonke, Atresmedia neMediaset, zezona ngoku zisasaza esona sabelo sinengeniso Iinkampani zemithombo yeendaba zosasazo zonxibelelwano, iAtresmedia neMediaset, zezo ngoku zisasaza esona sabelo sikhulu sinobuninzi bezabelo zaseSpain.
Ihlobo alilixesha elilungileyo lokutyala imali. Umthamo wesivumelwano uwela kakhulu xa kuthelekiswa namanye amaxesha onyaka. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lasehlotyeni ayiloxesha lilungileyo lotyalo-mali, apho umthamo wekhontrakthi wehla kakhulu xa kuthelekiswa namanye amaxesha onyaka
Ihlobo lifika ngomnye unyaka kunye nexesha elungiselelwe ukuphumla kunye nokuphumla. Ayingomzuzu oncomekayo kubo.Ihlobo lifika ngomnye unyaka kunye nexesha elimiselwe ukuphumla kunye nokuphumla. Ayiloxesha elilunge kakhulu kutyalo-mali kwiimarike ze-equity.
Enye yeemveliso ezithengiswa linani elibalulekileyo lokhuselo kunye neenkampani ezitshintshiselana ngesitokhwe ziiakhawunti zeengxowa-mali ezenzelwe enye yeemveliso ukuba inani elikhulu lokhuseleko kunye neenkampani ezitshintshiselana ngeentengiso ziiakhawunti zeengxowa-mali ezenzelwe abatyali mali abatyala imali ikakhulu kwimali ezihlangeneyo kwaye azifuni iikowuti zexesha langempela
Urhulumente omtsha oya kuthi iSpain abe nawo kwiinyanga ezizayo kufuneka asebenzele abatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba benze kakuhle xa kuyilwa iqhinga labo Elinye lawona macandelo achaphazelekayo alinakuba ngaphandle kombane, kwaye kungabi lilize, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba Olu hlobo lweenkampani zihlala zikhokela ukusika emva konyulo
Ngaphandle kokungaqiniseki okuphezulu kwiimarike zezabelo zaseSpain, alithandabuzeki elokuba amathuba oshishino ahleli engatshintshiyo kwezi marike .. Ngaphandle kokungaqiniseki okuphezulu kwiimarike zezabelo zaseSpain, akukho mathandabuzo okuba amathuba oshishino asekhona nangoku
Isigqibo seBhanki eNkulu yaseYurophu (i-ECB) sokulibazisa ukunyuka kwenqanaba lenzala kwindawo ye-euro sinefuthe elahlukileyo kwisigqibo se-European Central Bank (ECB) sokulibazisa ukunyuka kwamazinga enzala kwindawo ye-euro ifuthe elahlukileyo ngokuxhomekeke kwicandelo ekuthethwa ngalo
Iziphumo zesigqibo esithathwe nguGoogle ukophula ubudlelwane kunye nophawu lwentengiso lwaseTshayina uHuawei kuvelise inkxalabo enkulu kwiziphumo zesigqibo esithathwe nguGoogle ukophula ubudlelwane kunye nophawu lwentengiso lwaseTshayina uHuawei lubangele inkxalabo enkulu kumncinci naphakathi abatyali mali
Ehlotyeni inokuba yeyokugqibela ngamazinga enzala asezantsi kwindawo ye-euro, ngokwe-European Central Bank (ECB). Onke amehlo nangona kunjalo, kweli hlobo ungathatha uthotho lwezicwangciso zotyalo-mali ezinokuthi zithande umdla wakho kwezi nyanga zikhethekileyo
Xa siphantse ukuntywiliselwa kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni, amaxabiso ecandelo lezokhenketho zezinye zezindululo ekufuneka sizithathele ingqalelo Xa siphantse sangena emanzini kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni, amaxabiso ecandelo lezokhenketho zezinye zezindululo zokuba zithathele ingqalelo ukonga ngokwenza inzuzo ngeli xesha lonyaka
Elinye lamaqhinga afumanekayo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukwenza ukonga kwabo kunenzuzo ngaphandle kokuthatha umngcipheko kukudibanisa idiphozithi Esinye sezicwangciso ezikhoyo kubatyali mali abancinci nabaphakathi ukwenza ulondolozo lwabo lube nenzuzo ngaphandle kokuthatha umngcipheko kukudibanisa iidipozithi zebhanki zexesha elide isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseYurophu, i-Eurostoxx 50
Ukuba kukho iimveliso ezimbini ezigcina ukufana okuthile phakathi kwazo, ngokungathandabuzekiyo ziingxowa-mali zotyalo-mali kunye nee-ETFs, ezaziwa ngcono njengengxowa-mali Ukuba kukho iimveliso ezimbini ezigcina ukufana okuthile phakathi kwazo, ngokungathandabuzekiyo ziimali zotyalo-mali kwaye ii-ETFs zaziwa ngcono njengokutshintshiselana. Ingxowa-mali
Ngo-Epreli, uninzi lwee-indices zemarike eziphambili zivalile inyanga ngohlaziyo, zivumela izicwangciso zepenshini ukuba zonyuke ngo-Epreli, uninzi lwezona zalathiso ziphambili zivala inyanga ngohlaziyo, zivumela izicwangciso zepenshini ngokubhencwa okukhulu kwizitokhwe amava abuyayo
Izabelo ze-Ibex 35 kunye ne-Ibex 35 Inverso zezona ndawo zingaziwayo zesitokhwe apho abatyali zimali abancinci nabaphakathi banokutyala khona I-Ibex 35 Izabelo kunye neIbex 35 Inverso zezinye zezona ndawo zingaziwayo apho abatyali mali abancinci nabaphakathi banokutyala imali yabo
Kuphela licandelo lombane elihleli linyuka lisuka kwindawo yokuwa kwizalathiso ezikhethiweyo zee-equity zaseSpain, i-Ibex 35. Ukuba ngexeshana elifutshane kuphela licandelo lombane elihleli lisebenza kwaye njengendawo yokuzimela ekuweni kwizalathiso ezikhethiweyo zezabelo zaseSpain, i Ibex 35 kwaye ngaphezulu nje kweveki ihambe ukusuka kumanqaku ayi-9.500 ukuya kuma-9.000
Ngokuqinisekileyo enye yeminqweno yakho ekhawulezileyo kutyalo-mali kukuthenga izabelo kwizabelo. Okwangoku kufuneka wazi ukuba awunyanzelekanga okwangoku ukuba ube nezinye iimveliso zamashishini ezingenanzala emisiweyo ezikuvumela ukuba wonge imali ngendlela enenzuzo, nangona kunjalo kwiimeko ezininzi phantsi kweemodeli zotyalo-mali ezingaphaya.
Ngokuqinisekileyo enye yeminqweno yakho ekhawulezileyo kutyalo-mali kukuthenga izabelo kwizabelo kunye neziqinisekiso ezithile zempumelelo. Ewe, ngokuqinisekileyo omnye weminqweno yakho ekhawulezileyo kutyalo-mali kukuthenga izabelo kwizabelo kunye neziqinisekiso ezithile zempumelelo.
Imakethi ye-Forex, enye ekutshintshiselana ngayo ngeemali, ivelisa uninzi lwamathuba okurhweba, kuba inye ...
Iimarike ezisakhasayo ngala mazwe okanye ezoqoqosho ezikwisigaba sotshintsho phakathi kwamazwe asaphuhlayo kunye namazwe Iimarike ezisakhulayo ngalawo mazwe okanye ezoqoqosho ezikwisigaba sotshintsho phakathi kwamazwe asaphuhlayo kunye namazwe ahambele phambili.
Ngokwedatha ebonelelwe yiReuters, i-IAG, i-Endesa, i-Enagás kunye neRepsol zizabelo ezibonelela ngesona sivuno siphezulu.Ngokwedatha ebonelelwe yiReuters, i-IAG, i-Endesa, i-Enagás kunye neRepsol zizabelo kunye nembuyekezo ephezulu ngokwesahlulo ngoku inikwe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35
Kube lixesha elide okoko isalathiso sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, singahambanga mva nje. Uluhlu oludlulayo phakathi ixesha elide isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, asizange sihambe kunye nokuhamba kwexesha. Kwisiqwengana esihamba phakathi kwamanqaku ayi-9.200 kunye nama-9.600 amanqaku aphawula umkhondo kwicala elinye okanye kwelinye
I-Vibex: isalathiso sokungazinzi kwimarike yaseSpain
Ngokuqinisekileyo awuzange uve ngeVibex kwihlabathi lotyalo-mali? Ewe sisalathiso esinokunika isikhombisi esingaqhelekanga ukuvula i-Vibex ngolu hlobo alubandakanyi ukhuseleko okanye iinkampani ezidwelisiweyo kwaye ngendlela ethile isalathiso soloyiko njenge-VIX e-United States kwaye isetyenziselwa ukwazi imeko yokwenyani kwiimarike
Imfazwe yorhwebo phakathi kwe China ne-United States iyaqina
Ukurhweba ngamasheya kwihlabathi liphela kuphila kumhla onzima ngenxa yesigaba esitsha esinaso ...
Izalathiso zemarike yaseSpain: yokutyala imali
Izabelo zaseSpain aziphelelanga kwi-Ibex 35, njengoko abanye abatyali mali abancinci nabaphakathi banokucinga ngalo mzuzu. Kukho ezinye ii-indices ezaziwa kancinci ezinokuba yinto yokusebenza kwethu ukusukela ngoku, kwaye ezinye zazo zichaphazeleka kakhulu, nangona ezinye zingaziwa kakhulu kwinxalenye elungileyo yabasigcini.
Ingeniso esisigxina okanye ingeniso eyahlukileyo?
Ukhetho phakathi kweemveliso kumvuzo osisigxina okanye kwii-equity sesinye sezigqibo ezivela kutyalo-mali lobuso bakho. Ukukhetha phakathi kweemveliso ezivela kwingeniso esisigxina okanye kwii-equity sesinye sezigqibo ezibangela ukuba batyale imali kwisemester yesibini
Ukuphazamiseka kwimarike yemasheya yimeko ngokuqinisekileyo ehleli ezingqondweni zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Akunakulityalwa ukuba kwezinye iimeko, ukuwa kwimarike yemasheya yimeko ngokuqinisekileyo ehleli ezingqondweni zabatyali mali abancinci nabaphakathi.
I-BME, ngokusebenzisa iBilbao Stock Exchange, iyavuma ukuthengisa ngomso umba omtsha weebhondi ezinzileyo ezisungulwe nguRhulumente waseBasque ngesixa seBME, ngeBilbao Stock Exchange, iyavuma ukurhweba ngomso umba omtsha weebond ezizinzileyo ezisungulwe nguRhulumente waseBasque. Isixa semali engama-600 ezigidi ze-euro
Imali ezihlangeneyo yindlela ekhuselekileyo nenenzuzo yokutyala imali kunye nokwenza ulondolozo olunenzuzo xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zotyalo-mali. Ngokukodwa, iimali ezihlangeneyo ziyindlela ekhuselekileyo nenenzuzo yokutyala imali kunye nokwenza ulondolozo olunenzuzo xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zotyalo-mali.
Abatyalomali bahlala bezibuza imibuzo emininzi engenakuphendulwa ngezizathu ezininzi. Kweli nqaku siza kubuza imibuzo emininzi abatyali-mali abanokuzibuza yona kwaye abanakho ukuphendula ngezizathu ezininzi kwaye kweli nqaku siza kubonisa ezinye zeenkxalabo esinokuzigcina ngaphezulu komzuzu omnye
Ubuncinci bokuthandabuza ukuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi eSpain bagcinile, le inxulumene nolonyulo jikelele olwenzekileyo Ubuncinci bokuthandabuza ukuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi eSpain babenako, kucinyiwe, okunxulumene unyulo jikelele olwenzeke kule Cawa idlulileyo
Iiakhawunti zokuhlawula yimveliso yebhanki apho inkcitho eninzi inokurekhodwa khona ngabanini bayo. Kukwabalulekile ukunxibelelana neeakhawunti zeNtlawulo ziyimveliso yebhanki apho inkcitho eninzi inokurekhodwa ngabanini bayo kwaye kubalulekile ukusebenzisana nezinye iimveliso zezezimali
Kunqabile ukuba kubekho umahluko omkhulu kangaka phakathi kwamaxabiso ezinto ezibhankini kunye nombane. Apho basiwe khona ngokupheleleyo lelona xesha linabileyo kuqoqosho apho amaxabiso ahambelana neebhanki anokusebenza kakuhle.
Ihlobo ngokuqinisekileyo lixesha elinzima lokuthengisa iimarike zezemali ngezizathu ezahlukeneyo esiza kuchaza apha ngezantsi. Ihlobo ngokuqinisekileyo lixesha elinzima lokuthengisa iimarike zezemali ngezizathu ezahlukeneyo esiza kuchaza apha ngezantsi.
Enye yeenjongo zabo nabaphi na abatyali zimali abancinci nabaphakathi kufuneka ibe kukukhuselwa kwezikhundla zabo kwiimarike zezabelo apha ngasentla Enye yeenjongo zabatyali zimali abancinci nabaphakathi kufuneka ibe kukukhusela izikhundla zabo kwiimarike zezabelo ezifana nesinye sezitshixo yiphumeze
La asingomaxesha amahle amaxabiso ecandelo lombane. Kwezi veki zidlulileyo, ngelixa iimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo ziye zafumana into Kukho into eyonakalisa kakhulu amaxabiso ombane ngaphandle kokuthandabuza okwenziwa kwezopolitiko zaseSpain ngenxa yenkqubo yonyulo
Nangona ii-equity zisebenza kakuhle, akukho nto ibalulekileyo kukuba izilungiso kwikota yesibini yonyaka Kwimeko apho ilahleko yokuxabiseka kwiimarike zesitokhwe, akukho mathandabuzo ukuba kukho amanye amacandelo anokusebenza kakubi kun kuwo onke amaxabiso
Imarike yempahla ebambekayo ibonisa ukwahluka okuncinci ngokuqala kwento entsha, apho iqondo lobambiso olumiselweyo lolona lubalaseleyo Idatha yaseburhulumenteni yakutshanje ibonisa ukuba kwimali-mboleko eyenziwe ngenani leepropathi, umdla ophakathi ekuqaleni we-2,61%
Ngokufakwa kulo nyaka kwimveliso entsha ye-Invesco, sele zikhona iimali ezininzi esele zenziwe ziinkampani zolawulo ezilawulwa yimigaqo Ngokubandakanywa kulo nyaka kwimveliso entsha ye-Invesco, sele kukho iimali ezininzi esele zilungiselele ulawulo iinkampani ezilawulwa yimigaqo kunye neenqobo zokuziphatha ezikhuselweyo yiCawa yamaKatolika
I-Income 4 Bank Analysis Department ibonakalise isicwangciso-qhinga sayo sokutyala imali se-2019, ephawulwe "kukuncipha komjikelo wezoqoqosho Asinakulibala ngeli xesha ukuba yimeko engaphambi kokunyuka kwereyithi kwindawo ye-euro, kuya kuba kubaluleke kakhulu ikamva lalo naluphi na uhlobo lotyalo-mali
Malunga nokuphelisa isemester yokuqala yonyaka lixesha elifanelekileyo lokujonga ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba ukusukela ngoku ukuya phambili kutyalo-mali kwingeniso Ukuba sowuzokuphela isemester yokuqala yonyaka lixesha elifanelekileyo lokucinga ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba ukusukela ngoku Okwangoku, ukutyalomali kwizabelo kulunge kakhulu
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo, abaseSpain banokuqeshwa kunye neepoll. Kodwa abatyali-mali nabo banomdla kakhulu ekwazini ukuba ziya kuba njani iimpendulo zeemalike.Amanye amacandelo esitokhwe abuthathaka kunamanye ngokubhekisele kwisigqeba esinokuthi senziwe emva konyulo jikelele kule nyanga.
Kuza ixesha lonyaka, njenge-Ista, apho ukhuseleko lokonga kufuneka lube ngaphezulu kwezinye izinto. Ngale ndlela, kuye kufike ixesha lonyaka, njengeVeki eNgcwele, apho ukhuseleko lokonga kufuneka lube ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselweyo
Yonke into ihlala injalo kumgaqo-nkqubo wezemali kummandla we-euro, emva kwentlanganiso yamva nje eyenziwe yi-European Central Bank (ECB). Kumjikelo wayo yonke into ihlala injalo kumgaqo-nkqubo wezemali kummandla we-euro, emva kwentlanganiso yamva nje eyenziwe yi-European Central Bank (ECB). Kwinkomfa noonondaba, umongameli wayo, u-Mario Draghi, uphawule ukuba intlanganiso yebhunga "ibingasebenzi"
Ukuba kukho ukhuseleko oludweliswe kwimarike yemasheya egcina imeko yezobuchwephesha ewohlokileyo, ngokungathandabuzekiyo yiBanco Sabadell. Ixabiso lalo linikiwe.Ukuba kukho ukhuseleko oludweliswe kwimarike yemasheya egcina imeko yezobuchwephesha ewohloke kakhulu, ngokuqinisekileyo uBanco Sabadell
Ikota yesibini yonyaka inokuzisa isimanga esingaqhelekanga ngokubhekisele kwi-Ibex 35 securities ekufanele ukuba yenze ipotfoliyo yethu yotyalo-mali.Ikota yesibini yonyaka inokuzisa isimanga esimalunga nokukhuseleka kwe-Ibex 35 ekufuneka enze ipotifoliyo yethu yotyalo mali. uphela unyaka
Kutshanje, iKhomishini yaseYurophu kunye neBhanki eNkulu yaseYurophu kunye neBhanki yaseSpain belumkisile malunga nemingcipheko ngaphakathi Kwisibonelelo sangoku kwimali mboleko yomntu, kukho enye yazo efuna iimpawu zayo ezizodwa ekuthiwa zezotyalo mali. iikhredithi
Alithandabuzeki elokuba umsebenzi wokuthenga izabelo kwiimarike ze-equity ufuna umzamo omncinci kwicala leenkampani ezincinci neziphakathi Akukho mathandabuzo ukuba umsebenzi wokuthenga izabelo kwiimarike ze-equity ufuna umzamo omncinci kwinxalenye encinci kunye nabatyali mali abaphakathi ngothotho lweedatha
I-Amadeus: inxibelelene ngokusondeleyo kukhenketho
Mhlawumbi elinye lawona macebo asebenzayo otyalo-mali asekwa ngamacandelo anokukhula okuphezulu kwimisebenzi yezoqoqosho.Kwelinye icala, ayinakulibaleka ukuba i-Amadeus yenye yezokhuseleko zaseSpain ezinolona hlobo lobuchwephesha lunezona mzuzu zichanekileyo
I-5 ezinomdla kakhulu kwiimarike zamasheya zamanye amazwe zokutyala imali kuzo
Okwangoku, isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, sele ikho ngamanqaku angama-9600. Ngandlela thile, kubonakala ngathi kukho inani leemarike kwizabelo zamanye amazwe ezinokuba luncedo kakhulu ekuvuleni izikhundla kwezi asethi zemali
Naturgy: njengenye indlela yotyalo mali kwi2019
I-Naturgy yenye yezokhuseleko ezenza okusemgangathweni kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Zombini ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka nakwi-Naturgy yenye yezokhuseleko ezenza okusemandleni kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka nakulo nyaka uphelileyo
Abatyalomali banokukhetha kuluhlu olubanzi lweebhanki ukwenza ukonga kwabo kunenzuzo kulo nyaka unzima kwiimarike zengeniso I-Bankia ifumene inzuzo enokubaluleka ye-703 yezigidi zeerandi ngo-2018, emele ukwanda kwe-39,2% xa kuthelekiswa no-2017.
I-European Central Bank (i-ECB) kutshanje ihlaziye uqikelelo lwayo lwezoqoqosho kumazwe ase-euro kule minyaka izayo. Apho inesi Sicwangciso-qhinga sokujongana nokwehla kwezoqoqosho kuya kuphuhliswa ngononophelo olukhulu kwisitokhwe esikhethiweyo
Enye yeengxaki ezinxulumene nayo nayiphi na into yokutshintshiselana kukuba wenza impazamo xa uthenga ngexabiso lemarike. Oko kukuthi, ukuze ukwazi ukuzilungisa ezi ngxaki kutyalo-mali kwiimarike ze-equity, siza kuphakamisa uthotho lwezisombululo ukuzama ukunciphisa le meko inokwenzeka ngeendlela ezithile kwimisebenzi yakho kwimarike yemasheya.
Iimveliso zokutyala imali kwizabelo
Imarike yemasheya yaseSpain ithengise i-41.407 yezigidi zeerandi ngoJanuwari, i-6,8% ngaphezulu kwenyanga ephelileyo kunye neyona nyanga ibalaseleyo ukusukela ngo-Okthobha, nangona i-18,6% ingaphantsi kwesinye seyona mizekelo ibaluleke kakhulu kwikamva kwii-indices zemarike yemasheya kwaye zimele enye Indlela yokuqonda ukutyala imali kwiimarike zezabelo
Akukho mathandabuzo ukuba eSpain kukho eminye imithombo yesalathiso engaphaya kwesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Ngokukodwa, iIbex 35 Izabelo zizinto eziluncedo kakhulu kubatyali mali ezibandakanya ukwahluka kwamaxabiso amaxabiso
Unyaka we-2018 ibingunyaka onzima kakhulu kwimarike yaseSpain yokuwa kufutshane ne-15% kwi-Ibex 35, elona nani limbi kule minyaka idlulileyo. Nangona elinye lamaqhosha asetyenziswa ngabaphathi belizwe nakwamanye amazwe lijolise ekujoliseni amaxabiso esitokhwe athe kwehla kakhulu ngo-2018
Abatyalomali banokukhetha kuluhlu olubanzi lwamajelo olwazi ukufumana imeko yangoku yotyalo-mali lwabo. Ihlala isekwe kubaTyalomali banokukhetha kuluhlu olubanzi lwamajelo olwazi ukubeka esweni ngokuchanekileyo amaxabiso kwimarike yemasheya
Esinye sezona zitshixo ezisebenzayo ekuphuculeni utyalo-mali sihlala kwinyani yokwenza ujikeleziso oluchanekileyo kwiinqobo ezenza utyalomali lwethu Esinye sezitshixo sokwenza utyalo-mali sihlale sisenza ujikeleziso oluchanekileyo kumaxabiso enza ipotifoliyo yotyalo mali
Ekuqaleni, lumka kwizitokhwe ezithengisa ngaphantsi kweyuro enye. Phakathi kwezinye izizathu kuba nje ukuba kufikelelwe ekuqaleni, umntu kufuneka alumkele amaxabiso esitokhwe athengisa ngaphantsi kweyunithi ye-euro, kwaye phakathi kwezinye izizathu kuba wakuba lo mcimbi ufikelelwe, kunzima kakhulu ukuya esidlangalaleni.ngaphezulu kwe-euro.
Ukungena ngokuchanekileyo kwiimarike yenye yeenjongo zakhe nawuphi na umtyali mali kwaye ke kufuneka acwangcise icebo elicwangciswe kakuhle.Ukungena ngokuchanekileyo kwiimarike ngokuthenga yenye yeenjongo zakhe nawuphi na umtyali mali kwaye ngenxa yoko kufuneka acwangcise kakuhle qhinga
I-Intanethi yaseYurophu sisalathiso esiqokelela ikowuteshini yeenkampani ezibaluleke kakhulu kweli candelo lobuchwepheshe kwilizwekazi elidala kwaye, kwi-Intanethi yaseYurophu, sisalathiso esiqokelela ikowuteshini yezona nkampani zibalulekileyo zeli candelo lobugcisa kwakudala. Ilizwekazi kwaye, kubandakanya iinkampani ezidityanisiweyo ziye kwabanye kwinkqubo yolwandiso
Olunye uloyiko kwicala labatyali zimali abancinci nabaphakathi okwangoku kukuba iimarike zezabelo zinokungena ngokucacileyo Enye yoloyiko kwicala labatyali zimali abancinci nabaphakathi okwangoku kukuba iimarike zezabelo zingangena ekuhleni okucacileyo
Zintoni iimveliso ezakhiweyo?
Iimali zotyalo-mali sesinye sezixhobo ezikhethiweyo kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Kodwa ngohlobo lweemveliso ezilungelelanisiweyo, ngokuqinisekileyo sisicwangciso esisebenzayo kakhulu sokoyisa intsebenzo ebuthathaka enikezelwa ziimveliso zebhanki ngalo mzuzu.
Amacandelo emarike yemasheya yaseSpain
Phambi kokuvula izikhundla kwiimarike ze-equity kuyakubaluleke kakhulu ukuba ucace malunga namacandelo aya kuwo Phambi kokuba uvule izikhundla kwiimarike ze-equity kuya kuba yimfuneko ngokupheleleyo ukuba ucace malunga namacandelo aza kuya kuwo ukonga
Yintoni imali mboleko ekwi-Intanethi kwaye uyisebenzisa nini?
Fumanisa ukuba zeziphi iimali mboleko ezikwi-Intanethi, yintoni ekufuneka ujonge kuyo ukuze ukhethe enye kwaye xa kufanelekile ukuba ucele imali mboleko yezi mpawu
Ibex 35 phantse ngamanqaku angama-9600, ngoku uza kwenza ntoni?
Kubonakala ngathi ayinakucingelwa kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ngakumbi esiphelweni se-2019. Kodwa inyani kukuba isalathiso se-equity index ibibonakala ngathi ayinakucingelwa kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ngakumbi esiphelweni se-2019. Kodwa inyani kukuba isalathiso esikhethiweyo Amanani eSpain, i-Ibex 35, ngoku angama-9600 amanqaku
Ndiphulukana nemali: ndingenza ntoni?
Ukuze into eyenzeke kuwe kunyaka ophelileyo ingaphindi yenzeke, siza kukunika izikhokelo zokuziphatha ukuze wazi ukuba kufuneka wenze ntoni Ingxaki enkulu yokuphulukana nemali kwiimarike zezabelo kukuba izinto zinokuya zisiba mbi kwaye unelahleko kwimisebenzi yakho kwimarike yemasheya
Unyulo lwePalamente yaseYurophu lwango-2019 lucwangciselwe ukubakho kuwo onke amazwe e-European Union ngeCawa, nge-26 kaMeyi 2019. Ngomhla emva konyulo luka-Meyi lwase-Yurophu, iimarike zezabelo kwilizwekazi elidala ziya kunika isigwebo, kuxhomekeke Iziphumo
Ibhanki yotyalo-mali yase-US u-JP Morgan usandula ukusika amaxabiso eenkampani zentsimbi zase-Europe i-ArcelorMittal, i-Acerinox Ibhanki yotyalo-mali yase-JP u-JP Morgan isandula ukusika amaxabiso eenkampani zentsimbi zase-Europe.
I-Cellnex ngokungathandabuzekiyo ibe yenye yezona zimanga zintle kwii-equities kwezi nyanga zidlulileyo. Ukusukela oko yaqala ukudweliswa kwiCellnex, akukho mathandabuzo ukuba ibe yenye yezona zimanga zintle kwizabelo zamashishini kwiinyanga ezidlulileyo
Enye yezona zinto zintsha ezithe zangeniswa luluntu kutyalo-mali azizisanga kukuvela kwamaqonga ezemali amaninzi endingawaziyo.Kumaqonga orhwebo lwedijithali into ongayi kuyifumana ngokuqinisekileyo ziimveliso obusenza isivumelwano nebhanki yakho ngonaphakade.
Elinye lamaqhinga okutyala imali kwimarike yemasheya ngaphandle kokuvezwa kwenzeka kwiidipozithi zebhanki zexesha elisisigxina ezinxulunyaniswe neemarike Enye yeendlela zokutyala imali kwimarike yemasheya ngaphandle kokuvezwa yenzeka kwiidipozithi zebhanki zexesha elimisiweyo ezinxulumene neemarike zezabelo
Isigqibo esenziwe yi-European Central Bank (i-ECB) sokulibazisa ukunyuka kwexabiso lenzala kwindawo ye-euro sibonise ukungafani Isigqibo esenziwe yi-European Central Bank (i-ECB) sokulibazisa ukunyuka kwamazinga enzala kwindawo ye-euro, ibonakalisile ukwahluka kwixabiso lokhuseleko lwecandelo leebhanki kunye neenkampani zombane
Imeko yangoku yeemarike zezemali, zombini ezisisigxina kunye nengeniso eyahlukileyo, ikhokelela kubatyali mali abancinci nabaphakathi.Izinto ezininzi ezingafaniyo phakathi kokubheja kwezemidlalo notyalo-mali ngokwentsingiselo yokoqobo yelizwi kwaye le yinkalo ekufuneka uyixabisile.
Ityala loluntu eSpain
Olunye uloyiko kwicala labatyali zimali abancinci nabaphakathi okwangoku kukuba ityala loluntu liphezulu kakhulu kwaye linokuyixabisa indaleko Olunye uloyiko kwicala labatyali mali abancinci nabaphakathi okwangoku kukuba ityala loluntu liphezulu kakhulu kwaye inokulinganisa ubunzima bokuvela kweemarike
Unyulo eSpain aluchaphazeli imarike yemasheya
Isibhengezo sokubanjwa konyulo jikelele ngo-Epreli 28 asichaphazeli ukulingana. Le yinto enefuthe kunyulo olulandelayo alukho, ubuncinci okomzuzwana kwaye ngendleko zento enokwenzeka kwiiveki ezikhokelela kumbhiyozo wayo.
Ibex idlula amanqaku ayi-9.300: ngawaphi amacandelo oza kungena kuwo?
Okokugqibela, isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, yehlise inkxaso yezobuchwephesha eyomeleleyo ebinayo kwiinyanga ezininzi. Ndineenyanga ezininzi kumanqaku angama-35
I-Telefónica ibuyela ekuthengeni izikhundla
Umnxeba kazwelonke weTelefonica lixabiso ngoku elitsala isalathiso sokukhetha isabelo kwii-equity zesizwe, i-Ibex 35, emva kokuninzi I-Telecom Telefonica yelizwe lixabiso elirhuqa isalathiso sokukhethwa kwamasheya esizwe, i-Ibex 35, emva kweenyanga ezininzi Ukungaqiniseki okanye ngelahleko ebonakalayo kwixabiso layo
Iidipozithi zexesha elide: zinjani?
Olu didi lweemveliso zokonga, iidipozithi zexesha elide, zinokufumana ikhontrakthi kangangexesha eliphakathi kweminyaka emi-3 ukuya kwengama-6, apho olu didi lweemveliso zokonga, iidipozithi zexesha elide, zinokufumana ikhontrakthi ngexesha eliphakathi kwesi-3 kunye Iminyaka emi-6, apho iidipozithi ezinomdla okhulayo zinokukhethwa, zihlelwe okanye zidityaniswe kwisalathiso sesitokhwe
Yabelana ngokuthenga: kutheni bezenza izinto ezibonakalayo?
Ukubuyiswa kwezabelo sisicwangciso esiliqili ezenziwa ziinkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo ngokuhamba rhoqo. Kubonakele ukuthengwa kwakhona kwezabelo sisicwangciso esiliqili ezithi iinkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo ziqhube rhoqo
Uluvo oluqhelekileyo kwicandelo labahlalutyi bezemali kukuba ukukhula kwezoqoqosho kuya kuqhubeka kulo nyaka, nangona kungagungqiyo kunelinye lawona mathuba mabi otyalo-mali kulo nyaka, ngokoluvo lwenxalenye enkulu yabahlalutyi bezemali, kuxhomekeke embindini iinkampani -cap
Akukho namnye weearhente zezemali ongathandabuzekiyo ukuba isalathiso esikhethiweyo sengeniso eyahlukileyo, i-Ibex 35, ikwindlela ecacileyo yokuhamba kwexesha. Akukho mntu weearhente zezemali uthandabuzayo ukuba isalathiso esikhethiweyo sengeniso eguqukayo, i-Ibex 35, ikwindlela ecacileyo yokuba kamva
Omabini la mazwe aseYurophu naseMelika sele eza kufikelela kwelona nqanaba liphezulu kwixabiso lokhuseleko lwawo. Ngeminye imiqondiso Isisombululo esifanelekileyo sokwenza ukonga ngeniso ukusukela ngoku ukuya phambili simelwe yiimarike zezabelo zamanye amazwe asahlumayo
Alithandabuzeki elokuba ingxelo yesi sihloko yenye yeenjongo zenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngexesha, xa enye yeenjongo zenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi, ngexesha, xa iimveliso zengeniso esisigxina ezahlukileyo zingadluli kwi-1% kwimbuyekezo abayinikela kulondolozo.
Ukhetho lwentengiso yemasheya luxhomekeke kwimeko ezininzi kwisicwangciso ekufuneka sichazwe ngaphambi kokuvula izikhundla kwiimarike.Kukho uthotho lwezitshixo kutyalo mali olunokunceda abasebenzisi ukuba bahambise ngokuchanekileyo imisebenzi yabo kwiimarike.
Iinkampani zokwakha ezibaluleke kakhulu eSpain, kwaye ziyinxalenye yesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, zibhalisile ngexesha Lezona nkampani zibalulekileyo zokwakha eSpain, kwaye ziyinxalenye yesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35 , babhalise ukonyuka kwexabiso lentengiso kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo
U-Borja Prado ushiya i-Endesa kwaye uvula amathandabuzo amatsha kwinkampani
Enye yeendaba ethe yathathela ingqalelo kwezi ntsuku zangoku kukushiya inkokeli ephezulu ye-Endesa emva kweminyaka engaphezu kweshumi e-ofisini. Kwenye yeendaba ezithe zatsala umdla kwezi ntsuku zidlulileyo kukushiya isikhundla kwenkokeli ephezulu ye-Endesa emva kweminyaka engaphezu kweshumi e-ofisini.
Esinye sezona ziphulukene kakhulu kulo nyaka uphelileyo ngokungathandabuzekiyo sisiphumo sengeniso esisigxina esiye sazisa imbuyekezo embi Esinye sezona ziphulukene kakhulu kulo nyaka uphelileyo ngokungathandabuzekiyo sisiphumo sengeniso esisigxina esiye sanikezela ngembuyekezo embi
Ukuba injongo yabatyali mali kukukhetha iimarike zokulingana zaseYurophu, akukho mathandabuzo ukuba ezinye iindlela zibanzi kakhulu. Kwii-indices zesitokhwe saseYurophu yenye indlela yotyalo-mali ngaphandle kokushiya imida yelizwekazi elidala
Enye yezona mveliso zingaziwayo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ngokungathandabuzekiyo zibizwa ngokuba zizibophelelo zokuthand 'izwe. Ke enye yezona mveliso zingaziwayo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ngokungathandabuzekiyo zibizwa ngokuba zizibophelelo zokuthand 'izwe
Abasebenzisi ngoku abenze izivumelwano zepenshini kunye ne-Bankia banethamsanqa. Phakathi kwezinye izizathu, kuba okwangoku, ngaphezulu kwe-20% yokuthengiswa kwesicwangciso somhlala-phantsi kwenziwa ngeendlela zedijithali, amanqaku asixhenxe ngaphezulu konyaka ngaphambi kwalo mlinganiselo
Alithandabuzeki elokuba iinkampani zombane bezizezona ziphambili kwizabelo zamashishini eSpain kunyaka ophelileyo. Apho eli candelo alithandabuzeki ukuba iinkampani zombane bezizezona ziphambili kwizabelo zamashishini eSpain kunyaka ophelileyo
Enye yezona zinto zinomdla wokuvula okanye ukuvala izikhundla kwiimarike ze-equity yenziwa ngenkxaso nangokuchasa. Enye yezona zinto zinomdla wokuvula okanye ukuvala izikhundla kwiimarike zezabelo zenziwa ngenkxaso
Kwiminyaka yakutshanje, amaqonga ezemali edijithali enze imfashini njengeendlela zokuphucula utyalomali. Kodwa ayisiyiyo kule minyaka idlulileyo, amaqonga ezemali edijithali abe nefashoni njengemijelo yokuphuhlisa utyalomali
Imarike yemasheya yaseSpain ithengise i-41.407 yezigidi zeerandi ngoJanuwari, emele i-6,8% ngaphezulu kwenyanga ephelileyo kunye neyona nyanga ibalaseleyo ukusukela ngo-Okthobha, nangona a Kuba ivolumu yorhwebo incinci kakhulu oko kuthetha ukuba ukuxabisa okanye ukuphinda uvavanye amaxabiso azisekelwanga kakuhle
Ukuvela kwetekhnoloji entsha kunika izisombululo ezahlukeneyo zentlawulo ngabathengi bebhanki. Ukusuka apho banakho Ukuphazamiseka kwetekhnoloji entsha kunika izisombululo ezahlukeneyo zentlawulo ngemali ngabathengi bebhanki
Ayingabo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi abathatha umngcipheko ngendlela efanayo. Oku kubonisiwe kuphononongo lwakutsha nje olubizwa ngokuba yiNgxelo yendlela ezenzeka ngayo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi, iakisi ibekwa kwinto yokuba iqela lokuqala lamaqela
Akukho mathandabuzo ukuba isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, sikwindlela esecaleni apho kunzima kubo ukuphuma kule nto Akukho mathandabuzo ukuba isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, It kusemva kokuba kunzima ukuba baphume kwiinyanga ezidlulileyo
Enye yezinto ezichaphazela kakhulu amaxabiso ezokhuseleko kukulingana kwezivumelwano. Ukuya kwinqanaba lokuba yenye yezona zinto zichaphazela kakhulu amaxabiso ezokhuseleko yimalini yokuthengisa kwezokhuseleko.
Zintoni iimakethi zeUSDC?
Esinye sezindululo esitsha sokwenza ukonga kunenzuzo kukwenziwa kwemveliso enjalo kwaye kwangaxeshanye ingaziwa yinxalenye yakuba umthengi enze uphawu kwiimarike, zinokudluliselwa kumaqonga ezemali edijithali ngexesha elifutshane kakhulu
Amacandelo amahlanu ajongene nemarike yemasheya kwi2019
Esinye sezitshixo sokwenza utyalomali lube nenzuzo kulo nyaka kukuvelisa ukhetho olululo kwicandelo lokhuseleko. Kule Enye yezitshixo zokwenza ukuba utyalomali lube nenzuzo kulo nyaka kukuvelisa ukhetho olufanelekileyo kumacandelo ezemali
Ukuba kukho ibhokisi yezimanga kwii-equity zaseSpain ezingezizo ngaphandle kwenkampani yokuhambisa iDía.Le mihla yenza iindaba kuba inayo Ukuba kukho ibhokisi yezimanga kwizabelo zaseSpain ezingezizo ngaphandle kwenkampani yokuhambisa iDía
Elinye lamacandelo emarike yemasheya elinokuthi lifumane owona msebenzi mbi kulo msebenzi sisandula ukuwuqalisa ngumbane. Apho Elinye lamacandelo emarike yemasheya elinokuthi lifumane ezona ndlela zokuziphatha zibi kulo msebenzi sisandula ukuwuqalisa ngumbane
Bambalwa abatyali mali abanokucinga ukuba isiqingatha sokuqala sonyaka besizakunyusa kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Kodwa inyani kukuba bambalwa abatyali mali abanokucinga ukuba isiqingatha sokuqala sonyaka siyakunyusa kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo
Ibhunga lolawulo le-European Central Bank (i-ECB) ligqibe kwelokuba ligcine inzala ingatshintshi kwiintlanganiso zalo zokugqibela. Umzimba iBhunga eliLawulayo le-European Central Bank (i-ECB) uthathe isigqibo sokugcina inzala ingatshintshi kwiintlanganiso zawo zokugqibela.
Isenokuba ngumzuzu oqinisekileyo wokutshintsha imveliso yezemali ukwenza ulondolozo lwethu lube nenzuzo. Ngezizathu ezahlukeneyo ezinye zinokubonakala inoba lelona xesha lichanekileyo lokutshintsha imveliso yezemali ukwenza ulondolozo lwethu lube nenzuzo kwaye sikhangele ezinye iindlela
Esinye sezitshixo sokwenza utyalomali olufanelekileyo sisebenza ngokuthengwa kwesitokhwe esikwimeko yokuhamba Esinye sezitshixo sokwenza utyalomali olufanelekileyo sisebenza ngokuthenga ukhuseleko lwesitokhwe esikwimeko yokuma kwezinto.
Mhlawumbi abatyali mali abaninzi abazi ukuba ezinye izinto zibonakala kwiimarike zezabelo ukuze bakwazi ukuqeshwa. Imalunga nokuba mhlawumbi abatyali mali abaninzi abazi ukuba ezinye izibambiso ziyavela kwiimarike zezabelo ukuze babe nokuqeshwa
Ukujonga phambili kulo nyaka siwuqalileyo, umbono ovumayo wokuba abahlalutyi abahlukeneyo bezemali bayasungula kukuba abatyali mali kufuneka babe ngaphezulu.Ukuze benze iphothifoliyo yabo yezokhuseleko, kufuneka baziphephe izindululo zemarike yesitokhwe kwezona zinto zinobungozi
Inyanga kaJanuwari ibimnandi kakhulu kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35, ebuye yaqala umjelo wokunyusa ubuncinci ngokufutshane.Inyanga kaJanuwari ibikulungele kakhulu kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex I-35, ephinde yaqala kwakhona kwisitishi se-bullish ubuncinci kwixesha elifutshane
Ezinye iiakhawunti ziza kunikezela abathengi babo ngenqanaba lenzala eliyi-avareji elingaphezulu kwe-0,50%, oko kukuthi, malunga nesiqingatha sepesenti ngaphezulu.
Abatyalomali ababekwe kwindawo yentengiso yesitokhwe baya kufumana imvakalelo engathandekiyo ngeendaba zokuba inkampani yombane i-Endesa izakucutha i-Endesa izakunciphisa izabelo zayo ukusuka ngo-2021, kwaye esi sisicwangciso esichazwe kwiSicwangciso esiliQili.
Ukwahlulahlula kwimarike yemasheya yinxalenye yenzuzo yenkampani ethatha isigqibo sokuyihambisa phakathi kwabo bonke abanini zabelo benkampani. Yingeniso esisigxina Ukwahlulahlula kwimarike yemasheya yinxalenye yenzuzo yenkampani ethatha isigqibo sokuyihambisa kubo bonke abanini zabelo benkampani
Iimali zotyalo-mali sesinye sezixhobo ezikhethiweyo kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Njengeyona ndlela yokuhla yotyalo mali sesinye sezixhobo ezikhethiweyo kubatyali mali abancinci nabaphakathi
Elinye lamaxabiso axabisekileyo emali engenayo kuzwelonke efana neBanco Santander ikwindlela enqamlezileyo kulungelelwaniso lwamaxabiso ayo. Akukho namnye kumaxabiso aphezulu ezabelo zamashishini ezizwe ezifana neBanco Santander ekuphambukeni kwindlela yokuhambelana namaxabiso
Ukuba uneprofayili egcinayo, kuya kuba ngcono ngo-2019 ukuba utyalomali lwakho uluthumela kwii-asethi eziyimali ezikhuselekileyo kunalezo zibandakanywe kwiimarike. Esinye sezona sizathu sibalulekileyo sokuchaza olu tshintsho kulwazelelo kwiimarike zezabelo kumngcipheko wokwenene wokudodobala kwezoqoqosho okutsha
Uluvo ngokubanzi kwinxalenye enkulu yabahlalutyi bezemali ukuba kukho izizathu ezoneleyo zokukhetha isalathiso sengeniso iTecnicas Reunidas ijolise ekunyukeni kwemihla ngemihla ngaphezulu kwe-3% kwiveki ephelileyo, emva kokuhlengahlengisa amaxabiso ayo
Elinye lamanyathelo acingelwayo kumthetho wotshintsho lwemozulu kukuthintela ukuthengiswa kwedizili, ipetroli kunye nemixube kwelinye lamanyathelo acatshangelwe ngumthetho wotshintsho lwemozulu kukuthintela ukuthengiswa kwedizili, ipetroli kunye nomxube iimoto
I-European Stock Market kunye neeBond eziPhezulu zeNtlawulo zango-2019
Ukwenza ipotifoliyo yotyalo-mali ekhuselekileyo nenolungelelwano kulo nyaka umiyo, kuya kufuneka ukhethe ngakumbi kunangoku. Iimarike Izibophelelo zemveliso ephezulu yenye yeentandokazi ukujongana nalo nyaka unzima kwaye onokuba nethemba elihle
Iimali zotyalo-mali yenye yeemveliso ezikhethwayo kubasebenzisi bezemali. Ukongeza kokulula ukubhalisa, bayadityaniswa kule mali yotyalo-mali yenye yeemveliso ezikhethwayo ngabasebenzisi bemali ngokulula kwayo ukubhalisa
Akukho mfihlo yokuba kulo nyaka i-2019 izakubanzima kakhulu kuzo zonke iimarike zezemali, zombini ezo ze-equities kunye nengeniso esisigxina. Ayisiyomfihlo into yokuba kulo nyaka u-2019 uzakubanzima kakhulu kuzo zonke iimarike zezemali, zombini ezo ze-equities kunye nengeniso esisigxina.
Ukuba kukho ixabiso elilelona liziko lokuxelwa kwangaphambili kwinxalenye yabatyali zimali abancinci nabaphakathi, ngokungathandabuzekiyo yiTelecom Telefónica. Ukuba kukho ixabiso elilelona liziko lokuxelwa kwangaphambili kwinxalenye yabatyali mali abancinci nabaphakathi, ngokuqinisekileyo yile teleco Telefónica
Ukuvela kweemarike zezabelo zamazwe ngamazwe kuye kwaphawulwa ziingxelo zenkokheli ephezulu yeFederal Reserve yexesha elizayo yeemarike zezabelo zamashishini ziye zaphawulwa ziingxelo zenkokheli ephezulu yeFED malunga nendlela ezakubayiyo inguquko yeentlobo
Elinye lamaqhinga okusebenza kwiimarike ze-equity yinto ebonakalayo ngamanani abizwa ngokuba yitshathi. Banokukunika elinye lamaqhinga okusebenza kwiimarike ze-equity ezibonakalayo ngezinto ezibizwa ngokuba ziitshathi zamanani
Imeko yeemarike zamasheya zamanye amazwe inobungozi ngaphezu komdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho ukungazinzi yenye yezona meko zibi ezinokuthi zenzeke kwimarike yemasheya: ukwesaba kwimarike yemasheya kwaye kunokonakalisa utyalomali
I-inshurensi licandelo lezahlukeneyo kangangokuba unezisombululo zomsebenzi ngamnye ovela ebomini. Ukusuka kwimigaqo-nkqubo emininzi ye-Inshurensi licandelo lezahlukeneyo kangangokuba unezisombululo zento nganye evelayo ebomini
Uninzi lweendidi zotyalo-mali zithunyelwe ngaphandle ngoNovemba Olu luhlu lukhokelwa ziiMixed Funds, ezinamava okubuyiselwa kwemali Enye yezinto ekufuneka unike ingqalelo kuzo xa ukhetha imveliso enezi mpawu luhlobo lolawulo olwenziwa kuyo.
Njengayo yonke iminyaka emitsha eqala, inothotho lweempawu ezintsha ngokubhekisele kwii-indices zentengiso yesitokhwe se-Spain. Kulo nyaka umiyo, ii-equity zaseSpain ziya kwenziwa zizonke ezingama-127 kwezokhuseleko kwiMadrid Stock Exchange
Zonke iimpawu zekhosi entsha ye-2019 yemakethi yesitokhwe ngokuqinisekileyo ayikhuthazi kwaye ibonisa ubuncinci ukuba ukungazinzi kuya kubakho kwiLinye lamanyathelo ekufuneka bonke abatyali-mali bangenise kuwo ukuze baqwalasele ukhuseleko oluchazwe njengolukhuselayo okanye olulondolozayo.
Yonke into ibonakala ichaza ukuba lo nyaka awuzukuthandeka kwiimarike zezabelo, ingakumbi kumacandelo athile esitokhwe abonisa umkhwa.Yonke into ibonakala ngathi iyabonisa ukuba lo nyaka awuzukuthandeka kwiimarike zezabelo, ngakumbi kwiimarike ezithile zesitokhwe
Amandla amatsha okujongana nonyaka omtsha ngomnye weminqweno yokuba abantu abancinci nabaphakathi balindele ukufumana i-2019, nangona izakuxhomekeka kwizinto ezininzi. Kulo nyaka kuyakubakho izinto ezinokuthi zibeke icala kwicala leemarike zezabelo ezinokuthatha ukusukela ngoku
Ngunyaka omnye i-SSMM yaZoZilumko ezintathu ziya kutyelela nabatyali mali abancinci nabaphakathi ngoJanuwari 6. Kulo nyaka, ngaphezulu kunakuqala, amabango abo azakuba ngaphezulu.Umnye unyaka ongaphezulu, u-Uzuko Amakhosi Amathathu naye uzakundwendwela abatyali mali abancinci nabaphakathi ngezipho nge-6 kaJanuwari
Imarike yemasheya eJapan ithumele umqondiso ocacileyo kubatyali mali baseNtshona ngobusuku beKrisimesi kwaye ngokuqinisekileyo yayingenathemba kwaphela. Ngenye yeemarike zaseJapan ezithunyelweyo zanikela umqondiso ocacileyo kubatyali mali baseNtshona ngobusuku beKrisimesi kwaye ngokuqinisekileyo yayingenathemba kwaphela
Ukuwa kwemarike yemasheya ekupheleni konyaka
Ukucaphula kumaxabiso akhoyo, kuyinto eqhelekileyo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba bazibuze ukuba ayiloxesha lokungena kwiimarike zengeniso Ukuwa kwezalathiso eziphambili zezinto ezikhoyo kuyinyani kwimihla yokugqibela yonyaka kwaye uxinzelelo lokuthengisa irhafu
Ichaphazela njani inzala?
I-United States Federal Reserve (i-Fed) inyuse iqondo lenzala ngekota yenqaku ukuya kuluhlu oluphakathi kwe-2,25% kunye ne-2,5%, ngaloo ndlela iqinisekisa ukubaluleka kwale mpendulo kwiimarike zezemali. ihlabathi liphela
Kule mpelaveki, iraffle yesiNtu yeKrisimesi izakusasaza i-2.380 yezigidi zeerandi, ekuya kuthi kuphela abo baphumeleleyo bahlawule.Ukuba ungomnye wabaphumeleleyo ngeKrisimesi ekudala ilindelwe uza kupakisha i-322.000 ye-400.000 yeeros kwishumi
Akukho mathandabuzo okuba ukuqhelana ngakumbi nemigaqo yentengiso yesitokhwe kuya kunceda abatyali mali ukuba babe ngcono ngakumbi ekusebenzeni kwiimarike zesitokhwe kuya kubakho amagama amaninzi obuchwephesha anokubandakanywa kwisichazi-magama esincinci samagama ezoqoqosho.
Uloyiko lokuba ukuwa kweemarike zamasheya zamazwe aphesheya kunokwenzeka ukuba kubangele ukuba uninzi lwabatyali zimali abancinci nabaphakathi babe noloyiko lokuba ukuwa kwiimarike zamasheya zamazwe aphesheya kunokwenzeka ukuba kubangele ukuba uninzi lwabatyali zimali abancinci nabaphakathi babe ulumke ngakumbi
Ukungabikho kwemali kokhuseleko, okwaziwa njengechicharros, yinto ethintela abatyali-mali ukuba bangene okanye baphume kwizikhundla zabo.Phantsi kwehlelo lokhuselo olucingelwayo, uthotho lwamaxabiso axabisekileyo eSpeyin equities afakiwe.
Ngaphakathi kwirhafu engathanga ngqo, enye yezona zidume kakhulu yile ibizelwe kubhaliso, phakathi kwezinye izizathu kuba ichaphazela wonke umntu Ngaphakathi kwirhafu engathanga ngqo, enye yezona zidume kakhulu yile ibizwa ngokuba kubhaliso kwaye ichaphazela amawaka abasebenzisi
Ngeentsuku ezimbalwa kakhulu kude kube sekupheleni komnye unyaka wokurhweba, zimbalwa kakhulu izicwangciso onokujongana nazo zokuphela konyaka ngokukuko malunga neveki yokugqibela yonyaka umtyali mali angathatha amanyathelo athile ukunciphisa ilahleko kwistokhwe Intengiso ayiqokelele kule minyaka
Enye yeendaba ezintsha ezisizisela lo Disemba kukuba inkampani yombane i-Endesa sele iza kufikelela kwinani lokuphakama Enye yeendaba ezintsha ezisizisela lo Disemba kukuba inkampani yombane i-Endesa sele iza kuma inani elinyukayo
Ummangaliso wokugqibela wonyaka: ubudlelwane phakathi kwe-US-China
Xa yonke into ibonakala ngathi iza kungena kwirally yesiqhelo yeeholide zeKrisimesi sihlangane neendaba zokuba ubudlelwane bezorhwebo phakathi kwe-USA ne China buchaphazela ngokuchasene nazo zonke iingxaki zokuvela kweempawu ezisisiseko sentengiso kwihlabathi.
Omnye wemibuzo ophakanyiswe yinxalenye elungileyo yabatyali mali yimicimbi enxulumene nohlalutyo lobuchwephesha. Kwaye phakathi kwabo, ukutsala umva kubalulekile ukuze ubuyele uyokuqhuba imisebenzi kwimarike yesitokhwe ukhuseleko olukhulu kwaye ukwazi ukulusebenzisa ngokupheleleyo.
I-Eurona Wireless Telecom (i-EWT), yinkampani yezonxibelelwano yaseSpain ebonelela ngeenkonzo zokufikelela kwi-broadband, kwakhona Inyaniso yokuba izabelo ze-Eurona sele zingaphantsi kweyunithi ye-euro yonyusa uxinzelelo lokuthengisa kwizabelo zayo
Lumka kakhulu kulo nyaka apho imeko entsha okanye ukudodobala kwezoqoqosho kunokuvela. Oku kuyacaca emva kokuvela kolunye uphawu lokuba umyinge wenzala waseMelika unika abatyali mali abancinci nabaphakathi nawo ubaluleke kakhulu
Imali ezihlangeneyo ayisiyo mveliso yezemali ehamba ngamaxesha amahle kakhulu. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kwaye ngokweyona datha ibonakalisiweyo ukuba ukubuyiselwa kwemali kwabo banikezela iodolo kufikelela kumanqanaba angazange abonwe kule minyaka idlulileyo.
Njengesiqhelo, eyona njongo iphambili yabatyali mali abancinci nabaphakathi kukuvelisa eyona nzuzo inkulu kwimisebenzi yabo.Injongo enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi kukuvelisa ubuninzi beenzuzo ezinkulu kunye nokuphumelela ekusebenzeni ngengxowa.
Imeko ezinye zala mazwe ekuthiwa asahlumayo kwezoqoqosho zihamba phantsi kwazo, ziqhutywa yingxaki yaseTurkey naseArgentina, iya kule meko ezinye zala mazwe ekuthiwa ngoqoqosho olusakhulayo adlula kuzo yile nto ibangela ukuwa kwemarike yemasheya.
Elinye lamaxabiso ekuya kufuneka ukuba liqwalaselwe ngakumbi kulo nyaka sisandula ukuliqala alithandabuzeki ukuba lusuku oludwelisiweyo.Akukho nganto, yenye yeendlela zokuziphatha eziya kuthi zithathele ingqalelo kulo nyaka siwuqalileyo ngokungathandabuzekiyo lusuku olucatshuliweyo
Elinye lamaqhinga asetyenziswa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ukutyhila ukuba ngawaphi amaxabiso entengiso yesitokhwe Enye yeendlela ezisetyenziswa ngabatyali mali ukuveza ukuba ngawaphi amaxabiso esitokhwe esithengiswa kakhulu
I-Telefónica iyamangalisa kwaye ihambela phambili phantse ngama-5%
Enye yeendaba ezinamandla eziye zaveliswa kule veki ibaluleke kakhulu, kwaye kwangaxeshanye, ukunyuka okungalindelekanga kwizabelo zeTelefonica. Enye yeendaba ezinamandla eziye zaveliswa kule veki ibaluleke kakhulu, kwaye kwangaxeshanye, ukunyuka okungalindelekanga kwizabelo zeTelefonica
I-Brexit kunye ne-Italiya ziya esidlangalaleni kule veki
Isivumelwano phakathi kweNgilani kunye ne-European Union malunga nokusetyenziswa kwe-Brexit kunye nohlahlo-lwabiwo mali ngokubanzi oluza kwenziwa ngurhulumente wase-Italiya kuya kuba sisivumelwano phakathi kweNgilani kunye ne-European Union malunga nesicelo seBrexit iya kuba sisigqibo sokuvela kweemarike zamasheya zamanye amazwe.
Enye yeempazamo abanye abasebenzisi abaza kuthi bathathe umhlala-phantsi banokucwangcisa kukuba kwimeko embi baya kuqokelela ubuncinci bepenshoni Kwezinye iimeko ukuqokelela ubuncinci bepenshini eyimfuneko kuya kufuneka ukuba kufunwe ukugqitywa kwepenshini eyongezelelweyo kunye nokufezekisa Iinjongo
Itekhnoloji entsha ifikelele kwicandelo labucala lezemali ngokubaluleka okukhethekileyo. Ngamaqonga edijithali apho iiCredits phakathi kwabantu ezithile ziluhlobo lwemali olungaphumi ebhankini okanye kwiziko lezemali, kodwa kumntu onjengawe
I-inshurensi yotyalo-mali yimveliso yezemali ethi, nangona ibizwa ngokuba yi-inshurensi, iyafana ngakumbi neemodeli zebhanki ukwenza ukonga kunenzuzo. I-inshurensi yayo yotyalo-mali yimveliso yezemali ethi, nangona ibizwa ngokuba yi-inshurensi, iyafana ngakumbi neemodeli zebhanki eziqesha ukonga
Enye yeengxaki ezinkulu ezijamelene nenxalenye elungileyo yoosomashishini abancinci nabaphakathi sisimo sabo esikhulu sokufumana ubunzima kwiziphene zabo Esinye sezisombululo zale ngxaki inkulu sivela kwi-inshurensi yokungahlawuli eya kuqinisekisa iinkampani ukuba ziyakwazi ukuqokelela ii-invoice zazo
Enye yezona ngxaki zinkulu xa kuqeshwa imali yotyalo-mali ziikhomishini abanokuthi bajongane nazo. Akumangalisi ukuba olu hlobo lweyona nto iphazamisayo xa kuqeshwa imali yotyalo-mali ziikhomishini abanelungelo lokujongana nazo
Kule mihla sibona indlela enye yezona mveliso zezezimali zisakhasayo zibizwa ngokuba ziingxowa-mali zexabiso zotyalo-mali. Kodwa ngaba siyazi nyani?
Ewe, enye yeendaba ezifanelekileyo kulo nyaka kukusebenza okungafaniyo kwesalathiso sesitokhwe saseMelika, iDow Jones. Kufuneka sibuye sikhumbule ukuba iDow Jones ibikhula ngokuzinzileyo ukusukela ngethuba lokudodobala kwezoqoqosho ngo-2008.
Phantse bonke abatyali mali bayazi ukuba izabelo ziyinxalenye yenzuzo yenkampani ethatha isigqibo sokuyihambisa phakathi kwabanini zabelo. Zizahlulo, nakweyiphi na imeko, zihlawulwa ngemali ezinkozo kwaye lo msebenzi wenziwa ngokusesikweni ngonyaka, nangona kukho ezinye iifomathi